Caadooyinka iyo Caadooyinka Mareykanka: Waxyaabaha u gaarka ah dalka | Wararka Safarka
Kastamka iyo Caadooyinka Mareykanka
Luis Martinez | 16/06/2021 08:50 | dhaqanka, Mareykanka
Ka hadalka caadooyinka iyo dhaqamada Mareykanka ma sahlana. Waa waddan weyn oo dhaqamo badan ku wada nool yihiin oo mid kasta oo ka mid ahi leeyahay u gaar ah dhaqan u gaar ah. Tusaale ahaan, waxaa jira xoog bulshada Shiinaha oo xafidaya xafladeeda iyo dabaaldegyadeeda. Waxaan kuu sheegi karnaa isla wixii ku saabsan dadka u dhashay Talyaaniga, Ireland, Latin America ama Afrika.
Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waa run in, in ka badan laba boqol oo sano oo uu dalku haystay, taxane ah Caadooyinka iyo caadooyinka Mareykanka ee caadiga ah dhammaan dadka deggan. Haddii aad rabto inaad iyaga ogaato, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad sii wadato akhriska.
1 Caadooyinka iyo Caadooyinka Mareykanka: Kirismaska ​​ilaa Thanksgiving
1.1.1 Casho mahadnaq ah
1.2 Maalinta Madax-bannaanida
1.3 Maalinta St. Patrick
1.5 Halloween, waa mid ka mid ah caadooyinka iyo dhaqamada ugu badan ee Mareykanka ku baahsan adduunka
1.6 Xilliga Guga iyo caadooyinka kale ee Mareykanka ee ku xiran adduunka ardayda
1.7 Maalinta Xusuusta
1.8 Maalinta nacaska ee Abriil
Caadooyinka iyo Caadooyinka Mareykanka: Kirismaska ​​ilaa Thanksgiving
In kasta oo aan raaci karno amar taariikheed, haddana waxaan u aragnaa inay aad noo xiiso badan tahay inaan kaaga warrano caadooyinka iyo dhaqamada Mareykanka, anagoo ka bilaabayna ugu muhiimsan. Taasi waa, iyadoon loo eegin dalabkooda taariikhaha sanadka. Sababtaas awgeed, waxaan ku bilaabi doonnaa waxa ugu macquulsan, xitaa haddii la qabto Nofeembar.
Casho mahadnaq ah
Xaqiiqdii, malaha dhaqanka Waqooyiga Ameerika ee muhiimka ah waa kan Mahadcelin. Waxaanan dhahnaa Waqooyiga Ameerika maxaa yeelay sidoo kale waa looga dabaaldegaa gudaha Kanada, wadanka caadadiisu horey u jirtay waxaan u hibeynay boostada ku taal bartayada.
Waxay dhacdaa khamiista afaraad ee Nofeembar asal ahaanna waxay ahayd maalin loo qoondeeyay in loo mahadnaqo goosadkii sanadkii hore. Dhaqammada oo dhami waxay leeyihiin dabaaldegyo isku mid ah. Inbadan waxay kusii wadaan xuska, laakiin sinaba ugama xoog roonaan sidii tii Mareykanka.
Dhulka Waqooyiga Ameerika, damaashaadku wuxuu ka soo bilaabmay 1623 Taribo, xaalada Massachusetts ee hada jirta, markii dadka u dhashay iyo deganayaasha ay wadaagaan cunnadooda. Si kastaba ha noqotee, sannad-guuradii lama xusin mar kale illaa 1660. Sikastaba, macluumaadkan aan hadda soo gudbineyno waa lagu murmi karaa, maadaama taariikhyahanno kale ay dhigaan dabaaldeggii ugu horreeyay ee Thanksgiving St. Augustine, Florida, iyo sanadkii 1565.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, maalintan qadarinta ayaa loo aasaasay inay tahay dhaqanka ugu muhiimsan Mareykanka. Dalka oo dhan waa laga xusaa dhoolatusyo, laakiin muuqaalka ugu sarreeya ee dhacdada ayaa ka dhacaya casho-sharafta qoyska ee habeenkaas.
Guri kasta oo dalka ku yaal, qoysaska ayaa isugu yimaada casho. Kahor intaadan bilaabin cunista, duco ayaa la yiraahdaa si loogu mahadceliyo barakooyinka sanadkaas la helay ka dibna liis macaan ayaa la dhadhamiyay.
Aag kasta oo dalka ka mid ah wuxuu leeyahay astaamo gaar ah, laakiin qaybta ugu muhiimsan ee menu-ka ayaa ah turkey. Aad iyo aad bay u badan tahay, marka loo eego dhawaaq kaftan ah, Thanksgiving ayaa loo gudbiyaa sidii Maalinta Turkiga ama "maalinta turkey."
Guud ahaan, waxaa loo diyaariyey duban waxaana weheliya maraq buluug ah. Sida sharraxaad waxay leedahay baradhada la shiiday iyo waxa loogu yeero digirta cagaaran ee digirta cagaaran, saxan khudradeed oo laga sameeyay basal la shiilay, digir cagaaran iyo kareemka boqoshaada.
Ugu dambeyntiina, cashada mahadcelinta waxaa lagu duudduubay keega baradhada macaan, blackberry ama bocorka, ama daaweynta tufaaxa.
Casriyeyn dheeraad ah ayaa lagu daro maalinta Mahadnaqa. Waxaan kaala hadlaynaa adiga Black Friday, kaas oo isla markiiba dhaca ka dib. Jimcaha Madow waa waqtiga ay bilaabayaan Dukaamaysiga Kirismaska iyo silsiladaha tafaariiqda waaweyn ayaa dalabyo xiiso leh u adeegsada alaabtooda. Sidaad ogtahay, beryahan dambe maalintani waxay kaloo timid dalkeenna.
Bandhigga Maalinta Xorriyadda
Waa mid kale oo ka mid ah caadooyinka iyo dhaqannada Mareykanka ee sida qotada dheer ugu dhex jira dadka deggan waddanka. Sida magaceeda ka muuqata, waxay dib u xasuusataa Ku dhawaaqida gobanimada Mareykanka kaas oo la shaaciyey July 4, 1776.
Maalintaas, saddex iyo tobankii deegaan ee Ingiriisku waxay si rasmi ah uga go'een madax-bannaanida Ingiriiska, in kasta oo ay weli ku khasbanaayeen inay la kulmaan dagaal si loo gaadho. Si kastaba xaalku ha ahaadee, Maalinta Xorriyadda waa mid ka mid ah ciidaha ugu faca weyn dalka, tan iyo markii loogu dhawaaqay inay tahay maalin qaran 1870.
Bandhigyo, ciyaaraha baseball, rashka, iyo dhacdooyin kale oo badan oo xus ah ayaa lagu qabtaa Maraykanka oo dhan dhexdiisa sarraynta waddaninimada muwaadiniinta.
Maalinta St. Patrick
Maalintii Saint Patrick
Markii hore, waxaan kaala hadalnay isku-dhafka dhaqammada ka kooban Mareykanka. Kuwaas waxaa ka mid ah kuwa ugu tirada badan irishka. Waxaa jiray dad badan oo deganaa jasiiradda Ingiriiska oo u haajiray waddanka Waqooyiga Ameerika. Waqtigaan la joogo, waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 36 milyan oo muwaadin asal ahaan ka soo jeeda Irish ay qayb ka yihiin tan.
Waxaas oo dhami waa kuwo khuseeya maxaa yeelay waxaan kaala hadli doonnaa iid asal ahaan ka soo jeeda waddanka reer Yurub: the Maalintii Saint Patrick. Si kastaba ha noqotee, waxaa horeyba u qaatay dhaqanka Mareykanka mid ka mid ah caadooyinkiisa ugu muhiimsan uguna caansan.
Xaqiiqdii, munaasabaddii xusuusta ee ugu horreysay ee mucjisooyinka Mareykanka ayaa la qabtay 17-ka Maarso ee 1762 ee New York. Taasi waa, ka hor Mareykanku inuu ahaa qaran madax-bannaan. Xilligan, sannad kasta iyo taariikhdaas, waddanka waa la cagaaray, midabka caadiga ah ee Ireland waxaana jira bandhigyo lagu soo bandhigayo dhammaan magaalooyinka iyo magaalooyinka Mareykanka. Ma seegin dabaaldegga Beer, cabitaan caadi ahaan looga yaqaan Waqooyiga Ameerika sida waddanka Yurub.
Ciidaha Kirismaska ​​waxaa laga xusaa adduunka Galbeedka oo dhan. Mareykankuna ma noqon doono mid ka reeban. Xaqiiqdii, dadka Mareykanka waxay u tahay maalin aad muhiim ugu ah. Iyaga, waxaa ku jira dhacdooyin caan ku ah dalal kale sida Cashada Christmas Eve iyo qadada Christmas, laakiin sidoo kale caadooyin kale oo gaar ah iyo kuwa asaliga ah.
Kuwa dambe waxaa ka mid ah, qurxinta quruxda badan ee guryahooda leh nalalka, dhaqanka ah in sharaabaad looga tago Santa Claus isaga inuu uga tago hadiyadiisa ama caadadii mistletoe o Mistletoe. Waxay ka kooban tahay taas, markasta oo lammaane ay hoosta ka galaan, waa inay dhunkadaan oo midho ka gurtaan.
Halloween, waa mid ka mid ah caadooyinka iyo dhaqamada ugu badan ee Mareykanka ku baahsan adduunka
Halloween maahan fasax Mareykan ah. Taariikhyahanadu waxay dhigaan asal ahaan halka Samhain ee reer Celts. Cibaadadan jaahilka ahi waxay xusaysaa dhammaadka goosashada ee dhaqankaas qadiimiga ah waxayna dhacday Oktoobar 31.
Wax shaqo ah kuma lahan goosashada miraha Halloween maanta, in kasta oo ay sii socoto in loo dabaaldego isla maalintaas. Xaqiiqdu waxay tahay, in qarniyo, dhulka Waqooyiga Ameerika ay wax ku xardhaan bocorka kuwaas oo markaa lagu iftiimiyay muuqaal cabsi leh, kuwa yaryar waxay u labistaan ​​sida saaxirad ama jilayaal kale oo qarsoodi ah guryahana waa lagu sharraxay.
Laakiin waxaa laga yaabaa in dhaqanka ugu caansan uu yahay midka khiyaamada leh ama daweeya, iyadoo carruurta ay booqanayaan guryaha ku yaal xaafadooda si ay u weydiistaan ​​macmacaan. Haddayna helin, waxay kaftan yar ugula kacaan dadka deggan. Si la yaab leh, iyada oo aan dhab ahaantii la ogeyn sababta, dabaaldeg asal ahaan reer Yurub ah oo ku dhowaad lagu ilaaway Qaaraddii Hore, ayaa ka badbaaday Ameerika oo hadda ku soo laabtay dalalkeenna iyada oo guul weyn.
Xilliga Guga iyo caadooyinka kale ee Mareykanka ee ku xiran adduunka ardayda
Xeebta Florida inta lagu jiro Nasashada Guga
Qaar badan oo ka mid ah caadooyinka iyo dhaqamada ugu caansan Mareykanka waa inay la xiriiraan adduunka ardayda. Gaar ahaan, waxaan ka hadli doonaa labo ka mid ah.
Kuwa hore waa nasashada guga o nasashada guga. Muddo toddobaad ah, xilligaas, jaamacadaha waa la xirayaa iyadoo ardayda laga dhigayo mid xor ah, oo inta badan u socdaala meelaha ugu kulul dalka si ay ugu noolaadaan maalmo runti waalan. Xaqiiqdii waad aragtay filimo badan oo ka hadlaya mawduuca, laakiin waxaan kuu sheegi doonaa taas, tusaale ahaan, xeebaha florida waxay ka buuxiyeen dhalinyaro diyaar u ah inay ku raaxaystaan ​​xafladda.
Dhinaceeda, dhaqanka labaad ayaa ah Ahkhiro. Si ka duwan tii hore, waa ku soo dhawow jaamacada ardayda cusub. Markaan dib u bilaabayo koorsada, maahan oo kaliya xarumaha waxbarista waa la qurxiyey, laakiin sidoo kale bandhigyo magaalooyinka dhexdeeda ah iyo noocyada kale ee munaasabadaha ayaa la qabtaa.
Ku mahadnaq kuwa dhacay
Caadadani waxay leedahay cod aad u badan oo sharaf leh oo aan kuu sharixi doonno. Ku Memorial Day o Maalinta Xusuusta Waxay dhacdaa Isniinta ugu dambeysa bisha May waxayna xushmeysaa askartii Mareykanka ee naftooda ku waayey mid ka mid ah dagaalladii uu dalku soo farageliyey.
Asal ahaan, waxaa loo aasaasay in lagu xasuusto askartii la dilay intii lagu jiray Dagaalkii Sokeeye ama Dagaalkii Sokeeye ee Mareykanka. Laakiin markii dambe, cashuurta waxaa loo kordhiyay dhammaan Waqooyiga Ameerika oo ku dhacday dagaal u eg dagaal.
Maalinta nacaska ee Abriil
NCAA Maarso Waali
Ugu dambeyntii, waxaan kuu sheegi doonaa maalintaan aan isbarbardhigi karno tan iid ee Quduusiinta Quduuska ah. Asalkiisu wuxuu ka soo bilaabmay rabitaankii dadkii hore ee degay inay ku jeesjeesayaan Ingriiska si ay isu muujiyaan inay ka caqli badan yihiin
Sidaa darteed, haddii aad joogto Mareykanka Abriil 1, taxaddar, ma noqon doontid dhibbane kaftan. Si la yaab leh, waddanka Waqooyiga Ameerika ma aha kan keliya ee u dabaaldega. Waxay sidoo kale ka dhacdaa Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka, Boortaqiiska ama Baraasiil. Xitaa waxaa laga helaa dhaqanka jasiiradeena Menorca.
Gabagabadii, waxaan kuu sheegnay waxa ugu muhiimsan caadooyinka iyo dhaqamada Mareykanka. Laakiin waddanka Waqooyiga Ameerika ayaa leh kuwo kale oo badan. Tusaale ahaan, isaga Maalinta Madaxweynaha, oo dhacda Isniinta saddexaad ee bisha Febraayo laguna xuso dhalashadii George Washington. Ama, ciyaaraha, ee NCAA Maarso Waali, kaasoo kulmiya kooxaha kubbadda koleyga jaamacadaha ugu waaweyn wajigii ugu dambeeyay oo ay raacaan malaayiin dad ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Mareykanka » Kastamka iyo Caadooyinka Mareykanka
Dharka caadiga ah ee Yukatán